AFAR Kooxood Oo Dalabaad Miiska Usoo Saaray Xiddig Lagu Ilaaway Kursiga Keydka Liverpool & Tababare Jurgen Klopp Oo Ku Madax Adaygaya Inuu Iibiyo. - Gool24.Net
AFAR Kooxood Oo Dalabaad Miiska Usoo Saaray Xiddig Lagu Ilaaway Kursiga Keydka Liverpool & Tababare Jurgen Klopp Oo Ku Madax Adaygaya Inuu Iibiyo.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa lagu soo warramayaa inuu ku madax adaygayo in kooxdiisu aysan si sahlan ku fasixin daafaceeda midig ee Nathaniel Clyne walow ay dalabaad badan oo lagu doonayo heshay.
Clyne ayaa daafac asaasi ah kasoo ahaa shaxda tababare Klopp sanadihiisii ugu horreeyay ee kooxda balse dhaawac daran oo soo gaadhay iyo horumarka Trent Alexander-Arnold ayaa ka dhigay mid kaliya afar kulan Reds matala xilli ciyaareedkii hore.
28 jirkan ayaa sanadkii 2015 lacag dhan 12.5 Milyan kaga soo wareegay kooxda Southampton balse waxa uusan xilli ciyaareedkii dhawaa helin wixii uu doonayay waxaana bishii January qaab amaah ah loogu diray Bournemouth.
Haddaba, Kaddib fursad la’aanta ku haysata Liverpool Clyne ayaa helay dalabaad dhawr ah oo kaga kala yimi kooxaha Bournemouth, Crystal Palace iyo West Ham United sida laga soo xigtay Liverpool Echo.
Sidoo kale Nathaniel Clyne ayaa xataa dalab ka helay kooxda ree Talyaani ee Napoli balse Liverpool ayaa u sheegtay kooxdaas inay kaliya tixgelin doonaan dalabaadka ka sarreeya 10 Milyan ee xiddigooda laga soo gudbiyo.
Heshiiska uu Clyne kusoo joogay Liverpool ayaa dhici doona xagaaga dambe ee 2020 taas oo la micno ah inuu ku jiro xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay iyadoo sidoo kale la fahamsan yahay inaysan kooxdiisu wax heshiis kordhin ah miiska u saarin.
Liverpool ayaa horeba usoo muujisay inaysan wax cabsi ah ka qabin in xiddig kooxdooda ah ay xor ku waayaan oo uu heshiiskiisu dhammaado waxaana dhawaan sidaas kaga baxay Daniel Sturridge iyo Alberto Moreno.
Dhinaca kale bixitaanka Moreno ayaa noqon kara mid Klopp ku qasba inuu sidii hore kaga sii faro adaygo Clyne si uu kaabis ugu noqdo xiddigihiisa Arnold iyo Andrew Robertson.
Si kastaba ha ahaatee, Clyne ayaa dhawaan kusoo laabtay xerada tababarka Liverpool ee Melwood waxaana la aamisan yahay inuusan kooxdiisa siinin wax tilmaan ah oo sheegaysa halka uu doonayo inuu ka ciyaaro xilli ciyaareedka dambe.